कुनै किताबमा त लेखिएको होला नि सत्य !
किशोर नेपाल काठमाडाैं, २३ भदाै
भर्खरै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भन्नुभएछ, ‘त्यो बाह्रबुँदे सम्झौता, जुन गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहालका बीच भएको थियो, त्यो भारत सरकारले होइन, मैले गराएको थिएँ । हामी पर्यवेक्षकलाई अरु कुरा त थाहा भएन । तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुनै राजनीतिक अभिप्राय राखेरै, सम्झौताको अलग प्रतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो सबै हिसाबले राम्रो पनि भयो । त्यसपछिका घटनाक्रमको पछिलाग्नु पर्यवेक्षकका लागि आवश्यक छैन । त्योभन्दा अगाडिको समयको समीक्षा र विवेचना गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि यो दक्षिण एशियाको प्राचीनतम धर्तीमा हुने हुनामी के के भए ? भन्न सकिँदैन । न त राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रलयको संख्या गन्न नै सकिन्छ ।
भर्खरै सेतो पाटीमा हरि शर्माको पुस्तक–वार्ता पढ्दा ‘२०४६ सालअघि चप्प ललाएर हिँडने’ को चर्चा आयो, जो २०४६ पछि बेलायती कम्पनी ‘क्लार्क’ ब्राण्डेड जुत्ता लगाएर हिँड्न थाले । २०४६ सालको जन–आन्दोलनले विस्थापित गरेका राजनीतिक तत्वको मुखबाट चप्पलबाट जुत्तामा रुपान्तरको कथा मात्रै होइन, कसरी चप्पल लगाएर सामान्य भट्टीमा लोकल ‘माल’ तान्नेहरू रातारात बेलायतको डिष्टिलरीबाट उत्पादित उच्चस्तरीय ह्विस्कीको स्वादमा रमाउन थाले भन्ने पनि सुनिन थाल्यो । यो कसरी सम्भवभयो ? कसका कारण सम्भव भयो ? किन सम्भव भयो ? अहिले आएर यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु उचित हुने छैन । हलेदो भनेर जानिसकेपछि त्यसलाई कोट्याइरहनु जरुरी हुँदैन ।
यो समयको खेल थियो । समयले यो खेल खेलिरहेको बेला यस्ता तनाशाहहरूको मुकदर्शक धेरै थिए । हरिशर्मा त पंक्तिको पहिलो लहरमा नै हुनुहुन्थ्यो । २०४६ सालको आन्दोलनभन्दा अघिसम्म चप्पल लगाउनेहरू २०४६ को आन्दोलनपछि रातारात कसरी घर, गाडी, जग्गा, जायदादका मालिक भए ? यसको जानकारी हरि शर्मालाई नै हुनुपर्दछ । उहाँ त प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुख्य सचिवको पदमा रहनुभएको मानिस । के सुर चढेको थियो प्रम कोइरालालाई कि उहाँले ऐरेगैरे नत्थु खैरे सबै चप्पलधारीको उत्थान गरेर क्लार्क कम्पनीको जुत्ता लगाउने बनाइदिनुभयो ? किन देखाउनु भएको थियो यो उदार व्यवहार प्रम कोइरालाले ? हरि शर्माले त सबै कुरा नांगो आँखाले देख्नुभएको हो ।
जहाँसम्म २०४६ सालको जन–आन्दोलनअघि चप्पल लाउन नपाउनेले २०४६ सालको परिवर्तनपछि क्लार्क कम्पनीको जुत्ता लगाएको कुरा छ, यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु आवश्यक छैन । राणाकालीन समाजमा राजाका मानिसहरूको दुर्दशाका कथा सुनाउनुहुन्थ्यो किसुनजी । राणाहरूले राजाप्रति सद्भाव राख्ने मानिस त देख्नै हुँदैन थियो रे । त्यो समयमा धेरै मानिसको सम्पत्ति जफत भयो, लिलामीमा पर्यो, सर्वस्वहरण भयो । छँदाखाँदाका मानिस अचानक सडकमा आइपुगे । यस्तो सबैको पालामा हुने रहेछ । आफना चाकरीदार र स्वामीभक्त सेवकहरू, कसैलाई पनि केही दिन नपाएको झोंकमा राजा महेन्द्रले देशका निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई सेनाकोे भरमा अपदस्थ गरे । त्यसपछिको ३० वर्षमा राजाको अन्नपात खाएर हुर्किएको कति ठूलो फौज देखा पर्यो । कसैको वशमा छ, त्यसको लेखाजोखा ?
बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै जनताको आँशु देख्नुभएको थिएन । नेताका रूपमा पनि नेपाली समाजको गहन अध्ययन थियो उहाँको । हिजो आइतबार विमोचन गरिएको उहाँको डायरीको २००८ देखि २०१३ सम्मको खण्डमा एउटा ‘इन्ट्री’ छ ७ बैशाख २०१० को । त्यसमा बीपी लेख्नुहुन्छ, ‘निकै लामो जुलुस, जुन एक ठाउँ पुगेर सभामा परिणत भयो । मैले त्यस विशाल जनसभालाई सम्बोधन गरें । हावापानीले पनि सभालाई बिथोल्न सकेन । जनताबाट आइरहेको समर्थनले म निकै पुलकित थिए । मैले उनीहरूलार्ई भनें, ‘नेपाली कांग्रेसको अगाडिको कदम भनेको जमिनको स्वामित्वका आधारमा जमिन्दारहरूको शोषणको अन्त्य । जिल्लाका लागि तात्कालिक कदम भनेको पहिलो– बेगार प्रथा समाप्त गर्ने, र दोस्रो – जिरायत जमिन (भूमिपतिका लागि अरुले नै कमाइदिनुपर्ने प्रथा) अन्त्य गर्ने ।’
यहीँनिर सोध्न मन लागेको छ कि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका प्रगतिशील जमातलाई– किसानको स्थिति उति बेला २०१० सालमा र अहिले कति फरक छ ?
के नेपालका थारू जातिमा कुनै अस्वाभाविक खालको परिवर्तन देखिएको छ ? (बीपीले दाङका थारूको प्रसंगमा धेरै कुरा लेख्नुभएको छ डायरीमा ।) नेताहरू भन्छन्, ‘हामीले प्रगति गरेका छौं । के हो त त्यो प्रगति ?मात्रै मायाजाल ?’
यसर्थ, प्याट्ट यो कुरा नभनी हालौं कि २०४६ अघि चप्पल लगाउने हैसियत नभएकाहरूलाई हैसियत बनाइदिएको हो सत्ताले । आफैं हैसियत बनाएका कति थिए त समाजमा ? यसको गन्ती गर्नु आवश्यक छैन । आज पनि हेरौं, ज्ञान र शिक्षामाथि कसको हैकम छ ? को जब्बर छ ? कसले बोल्न सक्छ ? यो नयाँ युगमा पनि किन विशेष वर्गको आधिपत्य छ ? राजतन्त्र गयो, तर राजतन्त्रकोे हेकडीका रूपमा रहेका विशेष वर्गको आधिपत्यको अन्त्य भएन । लगभग १ लाख मानिसले देशको राजधानी शहरमा बसेर मोजमज्जाको जीवन बिताइरहेका बेला किन ९९ लाख मानिस देशबाहिर कतार र कुवेतको मरुभूमिमा सास फेर्न बाध्य छन् ? हरि शर्मा गुणी मानिस हुनुहुन्छ । विचारले सम्पन्न । यो देशमा सबैभन्दा धेरै पुस्तक पढने प्रतिभाशाली पाठक पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ । उहाँले २०४६ सालअघि चप्पल लगाउने कार्यकर्ताको मात्रै चर्चा गरेर पुग्दैन । २०३६ सालअघि केन्द्रीय कारागारको कारखानामा काम गरेर कमाएको ज्यालाले आफ्नो घर–परिवार जोगाउने कार्यकर्ताको पनि चर्चा गर्नै पर्दछ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २४, २०७६, ०१:३३:००